कुनराशीले कुन भगवान मान्दा भाग्य उदय हुन्छ ? भिडियोहेर्नुहोस – Sandesh Munch
September 26, 2020 181
यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तोसुकै दु:खमा पनि दिन्छन् साथ । श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुई पाग्रा जस्तै हुन् किनभने एक अर्काको साथ विना जीवन असफल हुन्छ । जीवनमा यी दईबीचको मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ ।
सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्छ । हामीले धेरै उदाहरणहरु पनि देखेका र सुनेका छौँ । विवाहपछि श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रदा जीवन नै पुरै सखाप भयो भन्ने ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार राशीको मेल नहुदाँ पनि श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्छ । त्यसैले आज हामी श्रीमानको जस्तोसुकै दु:खमा पनि साथ दिने राशीको बारेमा कुरा गदैछौँ । हेर्नुस् कुन कुन राशीहरु हुन् ? जानी राखौ ।
यो राशी हुने महिलाहरु दिमागी हिसाबले एकदमै चलाख र क्षमतावान हुन्छ । जो घर ,परिवार र समाजमा सधै अघि हुन्छन् । त्यसैले यो राशी भएका श्रीमतीहरु जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्ने सक्ने भएकाले श्रीमानको दु:खमा सधै हातेमालो गर्छन् ।
यो राशी भएका महिलाहरु पनि सफा मनको भएकाले दु:ख र सुख जस्तोसकुै अवस्थामा पनि रमाउन सक्छन् । त्यस्तै आफ्नो श्रीमानलाई साथ दिने कुरामा पनि निकै अग्रसर नै हुन्छन् । त्यसैले परिवारदेखि समाजसम्म यी राशीका महिलालाई सबैले मन पराउँछन् ।
कन्या राशी भएको महिलाहरु पनि सधै सकरात्मक सोच लिएर हिड्ने भएकाले एकदमै सरल स्वभावका हुन्छन् ।जसले गर्दा यो राशी भएका महिलाहरु श्रीमानको दुखलाई आफ्नो दु:ख मानेर सधै साथ दिन्छन् । यो राशीका महिलाहरु पनि सबैको नजरमा सहयोगी भावनाको कारण राम्रो हुन्छन् ।
Prevशनिबारजन्मिएका मानिसको स्वभाब र भाग्य कस्तो हुन्छ ?
Next‘मलमासमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
कल्पना र रमेश बिच गोहिरो सम्बन्ध भएको खुलसा ! बिवाह बारे यस्तो धारणा
११ वर्षया बालिकाको बयान: ‘बाजेले तानेर भित्र लानुभयो, मुख थुनेर कपडा खोल्नुभयो..(भिडियो)
झापामा एक पुरुषको घाँटीकाटेर ह त्या
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84117)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11983)